Ragga oo Door-bida in Haweenka Meel Kala Shaqeeyaa Xidhaan Dhar Asturan | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Ragga oo Door-bida in Haweenka Meel Kala Shaqeeyaa Xidhaan Dhar Asturan
Published: January 17, 2013, 4:09 pm
Cilmi-baadhis laga sameeyey goobaha shaqada dalka Ingiriiska, ayaa iftiimisay in raggu door-bidaan in haweenka meel kala shaqeeya laga mamnuuco xidhashada dharka gaagaaban si aan shaqadu u gelin hakan, isla markaana loogu mashquulin daawashada jidhkooda qaawan.
Daraasadda waxa lagu ogaaday in ugu yaraan saddex meeloodow meel ahaan ragga Ingiriisku ay aad u taageersan yihiin in haweenka laga joojiyo xidhashada dharka asturan, waxaanay 32% ka soo horjeesteen in dumarku xidhaan dharka gaagaaban xilliyada ay dibadda joogaan amma goobaha shaqada ku jiraan, halka 30% kalena taageereen in haweenka laga mamnuuco dharka jidhkooda ku dhegsan. Sidoo kale, 67% ka mid ah haweenka dalkaas ayaa iyaguna soo jeediyey in dumarku xidhaan dharka jidhkooda asturaya waqtiyada shaqada amma ay dibadda joogaan.
Cilmi-baadhistan oo laga fuliyey goobaha shaqada ee dalka Ingiriiska, isla markaana uu fuliyey mac-hadka British Heart Foundation, ayaa ku dhiirrigelisay dadka dadka inay goobaha shaqada u xidhaan dhar cas, iyagoo sheegay in 30% ka mid ah ragga ka qaybgalay daraasaddu sheegeen in markay dharka cas xidhan yihiin ay dareemaan kalsooni badan, halka 23% dumar ahna aad u jecel yihiin inay xidhaan dharka midabka leh.
Dr. Gayle Brewer oo bare sare ka ah mac-hadka UClan School oo cilmi-nafsiga lagu barto, ayaa sheegay in ragga shaqeeyaa ay doorbidaan in haweenka la shaqeeyaa xidhaan dhar asturan si aanay soo jiidasho u samayn, shaqaduna u joogsan, xumaana uga dhex dhicin shaqaalaha.